प्रहरीले लुकायो बिपना सुबेदी आत्म’ह’त्याको घटना, लाखौँ आर्थिक चलखेलको आशंका — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ५ (स्वामी चोक) स्थित आफ्नै मामा घरमा बस्दै आएकी वर्ष अन्दाजी २३ की बिपना सुबेदीको मृत्यु (आत्महत्या÷लागु औंषध ओभरडोज सेवन)को घटनालाई प्रहरीले नियोजित रुपमा गुपचुप राखेको पाईएको छ ।
गत् आसार १४ गते राती भएको सो (आत्माहत्या) मृत्यु प्रकरणमा शवसँगैं भेटिएको एक झोला बढी लागुऔंषध कस्ले कहाँबाट कसरी सो स्थानमा ल्यायो भन्ने बारे तथ्य लुकाउनु र घटनाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरणहरु चितवन प्रहरीले प्रेसमा सार्वजनिक नगरी यतिका दिनसम्म गुपचुप राख्नुले सो आत्महत्या प्रकरण थप रहस्यमय बनेको हो। आफन्तहरुसँगको मिलेमतोमा चितवन प्रहरीका प्रवक्ता, प्रमुख लगाएतका प्रहरी अधिकृतहरुले घटनालाई गुपचुप राखेको पाईएको हो।
अत्याधिक लागुऔषध सेवनको कारण मृत्यु भएको सो घटना र मृत्यु भएको शवसँगै भेटिएको ठूलो परिमाणको लागुऔषधलाई किन सार्वजनिक गरिएन? त्यो लागुऔंषध कहाँबाट आयो? अन्य स–साना दुर्घटना र आत्महत्याका घटनाहरुबारे जानकारी दिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले उक्त घटनालाई गुपचुप बनाउनुको कारण के हो भन्ने कयौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको कारण (आत्माहत्या) मृत्यु प्रकरण घटना नैं थप रहस्यमय र शंकास्पद देखिएको हो।
मृत्यु भएकी युवतीको शवसँगै थप करिब एक झोला लागु औषध समेत बरामद गरेको प्रहरीले सो लागु औषध बारे हालसम्म प्रेसलाई जानकारी दिएको छैन । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक नगर्नुले कता प्रहरी सँगैको मिलेमतोमै परिवारले घटनालाई गुपचुप राखेको त होइन भन्ने आम आशंका व्याप्त बनेको छ।
भरतपुर ११ नौंरगै स्थायी घर भएपनि लामो समयदेखि मृतक सुबेदीका स–परिवार अमेरिका बस्दैं आएको कारण विगत करिब ५ वर्ष देखि मामा घरमा बस्दै बिएन नर्सिङ्ग पढदै गरेकी उनी भरतपुरको अस्पताल रोडमा रहेको सप्तगण्डकी अस्पतालमा स्टाफ नर्समा कार्यरत थिईन। सुबेदीको मृत्युलाई परिवार र प्रहरी दुवै तर्फबाट गुपचुप राखीएको देखिन्छ। मृतकका परिवारले उनको मृत्युलाई किन लुकाउन चाह्यो त्यो उनीहरुको आफ्नै कारण हुन सक्ला ?
तर प्रहरीले समेत घटना गुपचुप बनाउनुले कतै मृतकको शवसँगै कोठाबाट भेटिएको एक झोला लागुऔषधको डिलर (सप्लायर्स)लाई जोगाउन त यो सब नाटक मञ्चन गरिएको होइन भन्ने आम आशंका पैदा भएको छ। सो लागु औषध सप्लाई कस्ले गर्‍यो भन्ने प्रहरीले खोजीनीति नगर्नु वा गरेको भए प्रेसमा सार्वजनिक नगर्नुले प्रहरी जनउत्तरदायी नभएको देखिन्छ।
घटना गुपचुप राख्ने परिवारको प्रयास
घटना सुनियोजित रुपमा गुपचुप राखिएको मृतक युवतीको फेसबुक अकाउण्टबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। आजको सुचना सञ्चारको युगमा बिश्वको जुनसुकै कुनामा घटेको सानो घटना किन नहोस त्यो सार्बजनिक भएलगत्तै कतिपय त भाईरल नै हुने गर्दछ। अहिलेको युगमा बाटोमा एउटा कुकुर बिरालो मर्दा त सामाजिक सञ्जालमा “रिप” लेख्ने चलन छ। तर देशकै केन्द्रविन्दु चितवनको मुटु भरतपुरकी ति युवतीको मृत्युमा भने न त “रिप” र श्रद्धाञ्जली दिईएको छ न त परिवारलाई समवेदना नै। उनको मात्र होईन मृतकको आमा, मामा, दिदीबहिनी लगाएतका सम्पूर्ण आफन्त ईष्टमित्र एवं साथीभाईहरु कसैले उनलाई श्रदाञ्जली दिएको देखिदैन्।
मानौ बिपना सुबेदी अहिले पनि ज्युदै छिन्। उनको फेसबुकमा ४ महिना १२ दिन अगाडीको उनको जन्म दिनमा १८ जनाले त् उनको टाईमलाईन मै शुभकामना दिएको देखिन्छ। त्यस्तै ७७ फागुण ७ गतेको उनको एउटा फेसबुक पोष्टमा ५२ जना साथीहरुले कमेण्ट गरेका छन्। त्यस्तै फागुन २१ कै अर्को पोष्टमा ४२ जना साथीहरुले कमेण्ट गरेको देखिन्छ। उनको निधन भएको यतिका दिन भईसक्दा पनि न आफन्त र नातेदार न साथीभाई कोही कसैबाट उनको मृत्युमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको देखिन्न। यसले पनि लागुऔषध सेवनद्वारा मृत्यु भएकी ति युवतीको मृत्यु शंकाष्पद देखिन्छ र घटनालाई परिवारले सबैतिरबाट गुपचुप राख्ने प्रयास गरेको प्रमाणित हुन्छ।
साथीहरुलाई कसैसँग नबोल्न उर्दी जारी
मृतक सुबेदीका निकटस्थ साथीहरु, अस्पतालमा सँगै काम गर्ने स्टाफहरु र स्कुल कलेज सँगै पढेका उनका हितैंषीहरुलाई उनको आत्महत्या सँग सम्बन्धित कुनैपनि बिषय अन्यत्र कोही कसैसगं नगर्न उनका एक आफन्तले उर्दी नै जारी गरेको पाईयो। सो आत्महत्याको बिषयमा सोध्दा उनीहरुले मुख खोल्न डराए। हामीले मृतककी हितैषीहरु सँग कुरा गर्ने प्रयास गर्दा शुरुमा हामी सँग कुरा गर्न खोजेकाहरु पनि पछि कुरा गर्न चाहेनन्। उनीहरु किन मुख खोल्न डराएका रहेछन भनि हामीले बुझ्दा मृतककी साथी एक जना स्टाफ नर्स साथीले केहि कुरा नगर्नु भनि उनका आफन्तले धम्की दिएको बताईन।
उनले डराउँदै हामी सँग भनिन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट बोलाएमा वा प्रहरीले सोधेमा मात्र कुरा गर्नु अरु कोही कसैसँग केही कुरा नगर्नु भनेकाले म कुरा गर्न सक्दिन भन्दै उनी कुरै गर्न चाहिनन्। मृतक सुबेदीका एक दर्जन बढी साथीहरु सँग हामीले कुरा गर्न खोजे पनि उनीहरु मुख खोलेमा प्रहरी र परिवारको तनाब झेल्न पर्ने भयमा परेको देखियो। भरतपुरमा मात्र मृतकका दैनिक जसो अढाई दर्जन बढी साथीसँग हिमचिम रहेपनि उनको मृतयुबारे कोही नबोल्नुले सो मृत्यु प्रकरण थप रहस्मय देखिन्छ।
प्रहरी अनुसन्धान फित्तलो र शंकास्पद ?
सुबेदी (आत्महत्या) मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान कुनैपनि कोणबाट स्पष्ट र पूर्ण देखिन्न। एकातिर अरु सबै घटना र्दुघटनाबारे जानकारी दिने प्रहरीले यो अत्याधिक लागुऔषध सेवन (ओभर डोज)को घटना किन सार्बजनिक गरेन यसै शंकास्पद देखिन्छ। अर्को तर्फ शबसगै भेटिएको ठुलो परिमाणको सो लागु औषध कहाँबाट आयो? मृतकलाई कस्ले दियो?
मृतकलाई लागुऔषध दिनेहरु तर्फ अनुसन्धान किन गरिएन? यी र यस्तै यावत प्रश्नहरु उठेकोले प्रहरी अनुसन्धान पित्तलो, अधुरो र शंकास्पद देखिन्छ। जिल्लामा घटेका अन्य साना–साना घटनाको पनि जानकारी दिने प्रहरीले यो गम्भिर घटना बारे प्रेसलाई जानकारी नदिनुले प्रहरी अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा परेको हो।